#दसैं | Suvadin !
दसैंका मनाउन उपत्यकाबाट २४ लाख मानिस बाहिरिए
काठमाडौं । हिन्दू नेपालीको प्रमुख चाड दसैं मनाउन उपत्यकाबाट झण्डै २४ लाख मानिस बाहिरिएका छन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार असोज ५ गतेदेखि शनिबार साँझसम्म २३ लाख ८४ हजार ९३१ जना उपत्यकाबाट बाहिरिएका हुन् । यो अवधिमा १० लाख ४६ हजार ७४१ जना उपत्यका भित्रिएका छन् । महाशाखाका अनु...
दसैंमा काठमाडौंबाट २४ लाख मानिस बाहिरिए
काठमाडौं । असोज ५ गतेबाट शनिबार साँझसम्म करिब २४ लाखले काठमाडौं उपत्यका छोडेका छन । महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका अनुसार २३ लाख ८४ हजार ९३१ जनाले उपत्यका छाडेका छन भने यो अवधीमा १० लाख ४६ हजार ७४१ जना उपत्यका भित्रिएका छन । दसैं लगायत महत्वपूर्ण पर्वका लागि उपत्यका छाड्नेको संख्या २५ लाख बढी पुग्ने...
Suvadin Media 105 0
दसैंको आठौं दिन आज महाअष्टमी, के छ महत्व ?
काठमाडौं । आश्विन शुक्ल अष्टमीका दिनमा मनाइने महाअष्टमी पर्व आज हिन्दु नेपालीहरुले बडादशैँका रुपमा दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरी भव्यरुपमा मनाउँदैछन् । बडादशैँको आठौँ दिन आज महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विशेष पूजाआजा गरिन्छ । महाअष्टमीको दिन दुर्गा भवानीलाई शक्तिशाली बनाउने दिन भएकाले यसको...
दसैंमा मासु कसले कति खाने ?
काठमाडौं । सामान्यतया एक व्यक्तिले दैनिक दुई सयदेखि तीन सय ग्रामसम्म मासु खानु ठीक हो । यति मासु खाँदा आवश्यक पोषण तत्व पुग्छ । योभन्दा धेरै खाँदा स्वास्थ्यलाई फाइदा हुँदैन । बढी शारीरिक परिश्रम गर्ने व्यक्तिको पाचन प्रणाली बलियो हुन्छ । मानसिक काम गर्नेका हकमा सकेसम्म मासु नखाएकै राम्रो ।...
दसैंमा सशस्त्र प्रहरी यी रुटमा निःशुल्क बस सञ्चालन गर्दै
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले दसैंको अवसरमा तीन दिनसम्म काठमाडौं उपत्यकामा नि:शुल्क बस सञ्‍चालनमा ल्याउने भएको छ । सशस्त्रले उपत्यकामा २ वटा बस निःशुल्क रुपमा सञ्‍चालन गर्ने जनाएको छ । दसैंमा सार्वजनिक यातायात न्यून रुपमा चल्ने भएकोले सर्वसाधारणको आवागमनमा सहजता होस भनेर सशस्त्रले...
बसको टिकट नपाएपछि बसपार्कमा तोडफोड
काठमाडौं । बसको टिकट नपाएको र तोकिएको समयमा सवारीसाधन नहिडेको भन्दै यात्रुहरू आक्रोसित बनेका छन् । आक्रोसित यात्रुले आज यात्रुले पुरानो बसपार्क रहेको खुल्लामञ्चमा तोडफोड अस्थाई रेलिङ भाँचिदिएका छन् । दशैकालाग घर जान शनिबार बिहानै बस पार्क पुगेका यात्रुले टिकट नपाएपछि तोडफो गरेका हुन् । महानगरी...
दुई दिनमै चार लाख ५० हजारले छोडे राजधानी
काठमाडौं । दसैं मनाउन दुई दिनमा चार लाख ५० हजारभन्दा बढी मानिसले राजधानी छाडेका छन् । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा काठमाडौंका अनुसार यही असोज १५ गते दुई लाख १५ हजार र १६ गते दुई लाख ४२ हजारले राजधानी छाडेका छन् । महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रविराज पौडेलले यही असोज ५ गतेदेखि आज बिह...
Suvadin Media 111 0
बस पार्कमा टिकट नपाउने यात्रुको लाम : उनीहरूलाई एउटै चिन्ता, घर कसरी जाम
काठमाडौं । बुटवलका लागि टिकट लिन आज बिहानै देवान खनाल बस पार्क पुगे । उनलाई टिक पाउने ठूलो आशा थियो । अरु नभए पनि क्युफ्रि बसको टिक पाउँछु भन्‍ने उनलाई लागेको थियो । तर, त्यहाँ पुगेपछि परिस्थित ठिक उल्टो भयो । उनले कुनै बसको टिकट पाएनन् । बिहानै बस पार्क पुगेका उनी दुई बज्दासमेत टिकट नपाएर रन्थन...
दसैंका लागि स्वस्थ्य खानपानमा विशेष सावधानी
काठमाडौं । धेरैजसो चाडपर्वमा मासु आदि मिष्ठान्न अनिवार्यजस्तै हुन्छ । प्रोटिनयुक्त खानेकुरा बढी खाने र फुर्सदको समय हुँदा आराम बढी गरिन्छ । व्यायाम नहुने तर खानपान बढी हुँदा खाएको खानेकुरा अपच भएर धेरै बिरामी हुन्छन् । चाडबाडमा चिल्लो, पिरो, अमिलो तथा बोसोयुक्त खानेकुरा मन पराइन्छ तर मात्रा नमि...
यात्रुसँग लिएको बढी भाडा फिर्ता गराउँदै प्रहरी
काठमाडौं । दसैं मनाउन राजधानी बाहिरिने यात्रुसँग यातायात व्यवसायीले मनलाग्दी भाडा असूल गर्न थालेपछि यहाँका सडकमा चेकजाँचमा कडाइ गरिएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले काठमाडौंबाट आउने सवारी साधनलाई रोकेर यात्रुसँग भाडा के कति लिइएको हो सोधपुछ थालेको छ । कार्यालयका प्रमुख प्रहरी न...
जिउँदो खसी, बोकाको मूल्य प्रतिकिलो ५५०, च्याङ्ग्राको ७३०
काठमाडौं । सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत दसैंका लागि बिक्री गर्ने खसी, बोका तथा च्याङ्ग्राको मूल्य निर्धारण गरेको छ । कम्पनीले बिक्री गर्ने जिउँदो खसी, बोकाको मूल्य प्रतिकिलो रुपैयाँ ५५० र च्याङ्ग्राको मूल्य प्रतिकिलो ७३० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । उपभोक्तालाई खसी,...
दसैं मनाउन करिब सात लाखले काठमाडौं छोडे
काठमाडौं । आइतबारदेखि सुरू भएसँगै सो चाड मान्न गाउँ जानेको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले आइतबार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार असोज ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म झन्डै ६ लाख ८९ हजार ५ सय ७१ जना उपत्यकाबाट बाहिरिइसकेका छन् । पछिल्लो २४ घन्टाको तथ्यांकले भने १ लाख १२ ह...
राजधानीमा घटस्थापनाको भोलिपल्टदेखि खसीबोका बिक्री हुने
काठमाडौं । सरकारले दसैंका लागि काठमाडौंमा ल्याइएका खसीबोका घटस्थापनाको भोलिपल्टबाट बिक्री गर्ने भएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनीले असोज १३ गतेदेखि खसीबोका बिक्री गर्ने भएको हो । ३ हजार वटा च्यांग्रा र खसीबोका घटस्थापनाको भोलिपल्टदेखि काठमाडौंमा बिक्री गर्न लागेको उद्योग, वााणिज्य...
दसैंका लागि ८० प्रतिशत हवाई टिकट बुकिङ, गाडी पनि प्याक
काठमाडौं । दसैंमा लामो दुरीको बसको टिकट बुकिङ गर्न नपाएपछि यात्रुमा निराशा छाएको छ। काठमाडौंमा अध्ययनरत डोटीका दिल जोरा दसैंमा घर फर्कन बसको टिकट नपाएपछि बिहीबार गंगबुस्थित बसपार्कबाट खालिहात फर्किए। ‘हिजोसम्म परीक्षाका कारण टिकट लिन आउन भ्याइएन,’ जोराले नागरिकसँग भने ‘अत्तरियासम्म...
नेपाली आकासमा मनसुन दसैंसम्मै सक्रिय रहने
काठमाडौं । यस वर्ष मनसुन अन्त्य हुने पहिलेको औसत अवधिभन्दा तीन दिन पर पुगेको छ । नेपालको मध्य र पूर्वी भागमा दक्षिणपूर्वी जल वाष्पयुक्त हावाको प्रभाव देखिएकाले मनसुनी गतिविधि अझै बढ्ने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । मनसुन सकिनका लागि जुन किसिम...
दसैंमा घर जान टिकटको सकस
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले दसैंको अग्रिम टिकट बुकिङ आइतबारदेखि खुलेको बताएको छ । तर दसैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुलेको पाँच दिन बितिसक्दा पनि सर्वसाधारणले सहजै टिकट पाउन सकेका छैनन् । सर्वसाधारणले नयाँ बसपार्क, कोटेश्वर, गौशाला, सुन्धारा, भक्तपुर र ललितपुरका तोकिएका टिकट काउन्टरबाट सबै...
दसैंमा दैनिक ५ हजार खसिबोका चाहिने
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास अनुसार हाल उपत्यका तथा मुख्य सहरहरुमा औसत २५.३० केजीको खसीबोकाको माग संख्या प्रतिदिन १ हजार ८ सय ४० रहेको छ। दशैंको ७ दिन काठमाडौं उपत्यकामा लगायत मुख्य शहरहरुको औसत माग प्रतिदिन ५००० पुग्ने अनुमान अनुसार वर्षभरी मासुका लागि आवश्यक खसी/बोकाको संख्या करिब ५०,००० हुन...
मनसुन दसैंसम्मै सक्रिय रहने
काठमाडौं । मनसुन अझै केही दिन लम्बिने भएको छ । नेपालबाट मनसुन अन्त्य हुने समय सकिए पनि पछिल्लो केही दिनयता निरन्तर रुपमा बङ्गालको खाडीबाट जलवाष्पयुक्त हावा आइरहेकाले दसैंसम्म मनसुन सक्रिय हुने सम्भावना छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसुनी न्यून चापीय...
सरकार के दसैंमा गाई काटिन्छ ?
काठमाडौं । गाईको विषयलाई लिएर आज एकाएक सामाजिक सञ्जाल तात्यो । पशु सेवा विभागले दसैंलाई लक्षित गर्दै एउटा पोस्टर सार्वजनिक गर्‍यो । जसमा लेखिएको थियो ‘बधशालादेखि भान्सासम्म स्वस्थ र स्वच्छ मासु’ । उक्त पोस्टरमा तयारी मासु, कुखुरा, माछा, भैसी, भेडा, बंगुर, बाख्रा, चरा र दाना...
असोज १२ बाट सार्जनिक यातायातलाई रुट परमिट नचाहिने
काठमाडौं । दसैंमा घरजाने यात्रुलाई सहज गर्न असोज १२ गतेदेखि सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न रुट परमिट नचाहिने ब्यबस्था गरिएको छ । १२ गतेदेखि १९ गतेसम्म रुट परमिट खुल्ला गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । साथै यस समयमा सवारी छाप धेरै हुने भएकोले ठुला मालवाहक गाडीहरू भने चितवनबाट काठमाडौं आउन...
दशैंमा डिलक्स र सुपरडिलक्सको भाडा २० प्रतिशतले थपिने
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले भाडा पूरानै कायम गरिएको जनाएपनि डिलक्स र सुपरडिलक्सको लागि भने २० प्रतिशतले थप हुन सक्ने जनाएको छ । यात्रुलाई भाडादरमा द्विविधा नहोस् भनेर विभागको वेबसाईटमा समेत सुचना राखेको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए । त्यसका साथै विभागले प्रचार...
दसैंको लागि अग्रिमत टिकट खुल्यो, यात्रुको सुविधामा विशेष ध्यान
काठमाडौं । दसैं, तिहार तथा छठ पर्वका लागि काठमाडौंबाट बाहिरिने यात्रुका लागि अग्रिम टिकट आजदेखि खुला भएको छ । दसैंमा काठमाडौंबाट विभिन्न जिल्लामा जाने यात्रुको चाप भएकाले आजैदेखि टिकट खुला गरिएको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले यसपल्ट यात्रुहरुको सु...
आज पनि ओरालो लाग्यो सुनको भाउ, तोलाको ७० हजार ७ सय
काठमाडौं । केही दिन यता निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको सुनको भाउ आज पनि ओरालो लागेको छ । तीजमा बढेको सुनका भाउ दसैं नजिकिँदै जाँदा घट्दै गएको हो। प्रतितोला ७३ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पुगे सुन आज ७० हजार ७ सयमा कारोबार भयो । बुधबार प्रतितोला ७१ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार हुँदै आएको सुन प्रतितोल...
असोज १० गतेदेखि दसैंका लागि नयाँ नोट सटही
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले यो वर्ष असोज १० गतेदेखि सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट सटही सुविधा दिने भएको छ । हरेक वर्ष दसैंको अवसरमा राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट बजारम पठाउने गरेको छ। ‘सटही सुविधाका लागि ठाउँ व्यवस्थापन गर्न कठीन भएर यो वर्ष केही ढिला हुने भएको छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता एवम्...
दसैंअघि सार्वजनिक यातायातको भाडा नबढ्ने
काठमाडौं । सरकारले दसैंअघि सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा नबढाउने निर्णय गरेको छ । भाडा समायोजन नियमित गर्नुपर्ने भए पनि दसैं अगाडि भाडाका विषयमा कुनै निर्णय नहुने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । यातायात व्यवसायीसँग अग्रिम टिकटका लागि बैठक भइरहँदा पनि भाडा समायोजन तत्काल गर्ने गरी छलफल नभएक...
दसैंको अग्रिम टिकट बुकिङ असोज ५ बाट
काठमाडौं । दसैंका लागि असोज ५ गतेदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागमा बिहीबार बसेको बैठकले विभागका अधिकारी, यातायात व्यवसायी तथा ट्राफिक प्रहरीको संयुक्त बैठकले असोज ५ देखि अग्रिम बस टिकट बुकिङ खुला गर्ने निर्णय गरेको हो । यातायात व्यवसायीले दसैंको टिकट बुकिङ खोल्न शर्त...
सरकारले दसैंका लागि तीन हजार खसीबोका काठमाडौं ल्याउने
काठमाडौं । दसैं नजिकिदै गर्दा चारै तिर रौनक छाउन सुरु भइसकेको छ । सरकारले पनि दसैंका लागि सुपथ मूल्य पसल खोल्‍नेदेखि खसीकोका राजधानी भित्र्याउनेसम्मको तयारी गरिरहेको छ । गत वर्ष सरकारले झन्डै २ हजार खसीबोका राजधानी भित्र्याएको थियो भने यसपाली तीन हजार भित्र्याउने तयारी गरेको छ । खाद्...